Line Walker 2: Invisible Spy (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 5.8/10 343 votes
Line Walker 2: Invisible Spy (2019) သညျ IMDb 6.0 /10 Rotten Tomatoes 83% Google users 89% ဒါရိုကျတာ Jazz Boon က ရိုကျကူးထား၍ Cat Kwan က ဇာတျလမျးဇာတျညှနျးရေးသားကာ သရုပျဆောငျ Louis Koo, Nick Cheung, Francis Ng တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသော Action ဇာတျကားကောငျး တဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ တငျဆကျလိုကျပါရစေ….
ရဲတပျဖှဲ့အတှငျးမှာ လာဘျစားနကွေောငျး သကျသတှေကေို ဖျောထုတျပွီးတဲ့ နောကျ ဟောငျကောငျမှာ ရဲ အရာရှိသုံးယောကျဟာ သူတို့တှထေဲက ဘယျသူဟာ ယုံကွညျရသူ ဖွဈမလဲ ရှာဖှဖေို့ကွိုးစားတဲ့အခါ ဘယျလို အကျရှငျခနျးကောငျးကောငျးတှေ မွငျတှရေ့မလဲ ဇာတျကားမှာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုခံစားကွညျ့လိုကျပါခငျဗြာ..
Line Walker 2: Invisible Spy (2019) သည် IMDb 6.0 /10 Rotten Tomatoes 83% Google users 89% ဒါရိုက်တာ Jazz Boon က ရိုက်ကူးထား၍ Cat Kwan က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Louis Koo, Nick Cheung, Francis Ng တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….
ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာ လာဘ်စားနေကြောင်း သက်သေတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့ နောက် ဟောင်ကောင်မှာ ရဲ အရာရှိသုံးယောက်ဟာ သူတို့တွေထဲက ဘယ်သူဟာ ယုံကြည်ရသူ ဖြစ်မလဲ ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ဘယ်လို အက်ရှင်ခန်းကောင်းကောင်းတွေ မြင်တွေ့ရမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ..
Option 1 storage.msubmovie.com 462 MB SD (480p)
Option2megaup.net 462 MB SD (480p)
Option3datbu.com 462 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 462 MB SD (480p)
Option5sharer.pw 462 MB SD (480p)
Option 11 storage.msubmovie.com 4.7 GB FHD DTS-HDMA 7.1
Option 12 megaup.net 4.7 GB FHD DTS-HDMA 7.1
Option 13 datbu.com 4.7 GB FHD DTS-HDMA 7.1
Option 14 sharer.pw 4.7 GB FHD DTS-HDMA 7.1
Option 15 yuudrive.me 4.7 GB FHD DTS-HDMA 7.1